Fikradda naqshadaynta ee 24 Tree Tartanka Fikradda loogu talagalay Raga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradda naqshadaynta ee 24 Tree Tattoos Loogu Talagalay Raga iyo Haweenka
Ma laga yaabaa in aadan ka fekerin tattoo geed marka aad diyaar u tahay in lagu qoro. Sababta waa mid fudud. Ma aha qof kasta oo danaynaya inuu helo.
Tattoo dhirta macnaha
Tattoo geedku wuxuu calaamad u yahay waayo-aragnimo culus iyo waaya-aragnimo dheer. Dhirta ayaa had iyo jeer joogaan wakhti dheer waxayna ku qaataan sanadaha 500 ee dhulka, jiilka soo baxa ee ninka. Tani waa sababta geedaha loo qoro si ay u muujiyaan nolol dheer iyo bogsoon. Awoodda #tree iyo is waafajintiisa xaalad kasta waxay tahay waxa ay ku dhibto dad badan. Qof kasta ayaa ku dhejin kara jirkiisa jirka. Geedka wuxuu ku siin karaa guryo iyo nabadgelyo badan oo xayawaan ah. Badbaadada ay u keento dadka kale waa wax cajiib ah. Kuwa raadinaya amniga noloshooda waxay awoodi karaan inay u adeegsadaan asluubtooda. Waa noocyo badan oo geedo leh macno kala duwan iyo muhiimada.
Geedka waxaa sidoo kale loo adeegsadaa qaar ka mid ah dhaqamada diinta sababtoo ah muhiimada ay tahay inuu ciyaarayo. Iyada oo tirada geedaha ee la heli karo iyo ficil ahaan astaamaha ay u taagan tahay, qof kastaa wuu isticmaali karaa. Waxaad u isticmaali kartaa geedka kuugu dhow ee dhaqankaaga si aad uga dhigto qaar ka mid ah astaamaha geeska ah ee jirkaada. Xaaladda astaamaha ee geedku waxay macno badan ku sameyn kartaa adoo habeynaya geedkaaga #tattoo jirkaada iyadoo ku xiran fariinta aad rabto inaad ka gudubto.
1. Dhirta tafaariiqda nolosha ee dumarka dib loo soo celiyo
Waxaa jira geedo kala duwan oo leh macnaha kala duwan. Markaad rabto in aad hesho tattoo geed, waa inaad marka hore raadsato wax yar oo cilmi ah oo ku saabsan geedka gaarka ah.
2. Shimbiraha xayawaanka iyo quruxda dhirta qaboobaha ee fikradaha naqshadaynta dumarka
Qaar ka mid ah macnaha dhirtu waxay badanaa ku xiran yihiin dhaqamada halkaas oo geedahan lagu helo. Waa inaad taqaanaa magaca geedka ee aad rabto in aad ku sawirto jirkaada.
3. U abuur fikrada dhirta dhirta dhirta gabadha
Marka aad hesho macnaha tattoo geedka sidan oo kale ah, waa sahlan tahay inaad u dhaqaaqdo naqshaddaada. Tani waa sababta aad ugu baahan tahay inaad mar walba qabato shaqada gurigaaga ka hor intaan la gelin.
4. Fikradda geedka dambe ee tattoo ee gabdhaha
Tani waa sababta ay muhiimka u tahay in aad tagto farshaxanka tattoo u qalma. Online waxay leeyihiin farshaxan farshaxan oo xirfad leh oo kaa caawin kara inaad isdhex gashid jirkaada.
5. Dufanka dhirta qaboobaha Fikradda naqshadeynta ee gabdhaha
Mudanayaasha lagama tagin qaabkan farshaxan. Markaad rabto in aad eegto si aad u fiican oo ka fiican, tattoo ayaa kuu qaban kara shaqada.
6. Fikradda dhirta dhirta oo cajiib ah oo loo isticmaalo gacanta
Waxaan aragnay sawiro badan oo la sawiray si loogu soo jiito qof walba dareenkiisa. Markaad haysato nooc tattoo oo kale ah, mar dambe laguma dhihin in lagugu dhejiyo dadweynaha.
7. Fikradda dhirta xayawaanka ee wiilka gacanta
Tattoo sidan oo kale ah waa wax aad rabto inaad hesho sababtoo ah si wanaagsan ayaa loo sawiray oo qurux badan si aad u aragto.
8. Fikradda naqshadaynta dhirta xayawaanka ee ragga
Sidee u jeceshahay naqshadeynta tattoo this? Muhiim ma aha waxa aad sameyso ama meesha aad ku imanayso tattoo sidan oo kale ah.
9. Fikradda dhirta xayawaanka lagu dhejiyo dhinaca haweenka
Dad badan ayaa isticmaalaya tattoo this iyo waxay ku darayaan dheeraad ah # xajis.
10. Aragtida naqshadaynta dhirta midabka leh ee dhinaca haweenka
Tilmaamaha khaldan ee khaladka ah ee jirkaaga ku yaala ayaa laga yaabaa inaanay noqon wax aad rabto inaad la kulanto. Sidaa daraadeed isticmaalka wanaagsan ee tattoo sidan oo kale ah
11. Fikradda dhirta dhogorta ee dhinacyada gabadha
Marka aad hesho tattoo this, waxaad u jeclaan doonaa iyada oo ah quruxda ku lifaaqan. Maxaad u maleyneysaa?
12. Fikradda dhirta fudud ee dhirta ee wiilka gacantiisa
Markaad rabto inaad isbeddel ka sameysid sawirada tattoo sidan oo kale, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa inaad fahamto qaabka tattoo uu ka hadlayo. Waxaa laga yaabaa in aad dhamaato helitaanka tattoo oo macnaheedu uusan noqon waxa aad filayso.
13. Fikradda naqshadeynta jirka ee wadnaha iyo lafa-gurka dhirta
Muhiimadda geedaha waxay la xiriirtaa dhaqamada waxayna leedahay macne xoog leh oo dadka intooda badan aysan dooneynin in ay ku hayaan jirkooda. il image
14. Fikradda naqshadaynta dhirta dhabarka ah ee gabdhaha
Tattoo geedka cherry waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo ku jira tattoos geedka. Waa tattoo dheddig ah oo ka hadlaysa quruxda iyo galmada. il image
15. Fikradda naqshadaynta dhirta qoyan ee curyaaminta
Dalka Japan, waxaa loola jeedaa nolosha marka loo eego Shiinaha, waxay u taagan tahay awood. Sidoo kale, cherry falley wuxuu macnaheedu noqon karaa in gabadh aanay mar dambe dambi lahayn. il image
16. Fikradda dhirta yaryar oo cagaar ah ku qor afka gabadha
Tani waa sabab keliya oo ay dadku u isticmaalaan si ay u muujiyaan naftooda. Haddii aad tahay qoob-ka-ciyaarka iyo takooreyaasha, waxaa jira kumaan kun oo naqshadood oo laga yaabo in aad rabto inaad la xiriirto. il image
17. Fikradda naqshadaynta dhirta geedaha ee gabdhaha
Isticmaalka tattoosyada geedka waxay noqdeen wax aan ku aragno qaar ka mid ah dadka adduunka ah sababtoo ah saameynta geesinimada leh ee cajiibka ah ee ay ku leedahay jirka. Marka ay timaado naqshadaha farshaxanka maqaarka, ma jiraan wax aan la socon. il image
18. Qorraxda, dayaxa iyo dhirta timirta caleenta sawir gacmeedka
Weligaa ma aragtay tattoos geedka canka ah? Dabcan waxaad haysataa. Tilmaamyadani waa dumar marka loo isticmaalo gabdhaha iyo qurux badan inay aragto. il image
19. Aragtida naqshadeynta dhirta geedo qurxinta
Dhirta waxaa loo yaqaan in ay noqdaan kuwo xiiso leh oo qurux badan. Tattoo-geedka kasta wuxuu leeyahay macnaha astaamaha, badankooduna waxay isticmaalaan iyaga il image
20. Fikradda dhirta jilicsan ee loo yaqaan 'tattoo inkir' ah ee gacanta gabadha
Waxaan kuu sheegi karnaa micnaha qaar ka mid ah tattoosyada geedka ka hor intaadan ka fekerin inaad isticmaasho. il image
21. Fikradda naqshadaynta dhirta dhirta ee wiilka gacantiisa
Si aad u hesho qaab wanaagsan oo ah tattoo geedku waa waxa aad u baahan tahay inaad marka hore tixgeliso. Waa inaad hubisaa in aad tixgelisay sawir-qaadaha oo kuu qabanaya sawirkaaga. il image
22. Dhirta xayawaan ee dhirta xambaara fikradaha gacanta wiilka
Tilmaamaha sawirku waa waxa ku xiga maalinta dhammaadka. il image
23. Fikrado qurxoon iyo dhirta xayawaanka ee gabdhaha dib loo soo celiyo
Waxaa jira siyaabo badan oo aad ku gaari kartid tan. Waxa ugu horreeya ee aad sameyso waa inaad eegto nooca farriinta aad rabto inaad ka gudubto. il image
24. Fikradda iyo midabka midabada leh ee loo yaqaan 'Tree Tattoo' ee loogu talagalay haweenka dib u soo laabanaya
Ka dib markaad tan sameyso waxaad ka hadli kartaa tattooist. Waxaa jira bogag internet oo aad ka heli karto tattooist wanaagsan oo loogu talagalay tattoos geedkaaga. Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan tahay inaad sawirto qeybta jirka ee aad u aragto inaad ku qanacsan tahay tattoo-geedkaaga. Maxaad ka fekereysaa dhirta geedka kuwan?
Waa in aan kuu sheegnaa in dhar-geedka xayawaanku uu yahay qurux iyo naadir. Haddii aad rabto in aad wax ku jiidato wax aad u qurux badan sidaan, waxaad u tegi kartaa iyaga. il image
tattoos ubaxtattoos taajkiiwaxay jecel yihiin tattoostattoo biyo ahnaqshadeynta mehndilibto libaaxtattoo maroodigaarrow TattooTattoo Featherfikradaha tattooshaatiinka shiidantattoos gacantatattoos iskutallaabtatattoos qoortaTattoos Wadnahakoi kalluunkatattoos qabaa'ilkalammaanahatattoos cagtaDhaqdhaqaaqasawirada malaa'igtatattoos qorraxdatattoostattoo tilmaantattoos qosol lehsawir gacmeedjimicsiga bisadahaJoomatari Tattoostattoo dheemanshimbir shimbirlaabto laabtatattoo indhahatattoos moongaraacista gacmahatattoos eagleTartoo ubax badanmuusikada muusikadaTilmaamta jaalaha ahtattoos saaxiib saxa ahhenna tattoosawirada gabdhahatattoos sleeveTattoo infinitywaxaa la dhajiyay tattoostattoo ah octopussawirrada raggaku dhaji tattoosgadaal u laabocalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtaraagada kubbadda